Ny fantsona fantsona lakozia dia malaza eo amin'ny tsena anatiny tato anatin'ny fito na taona lasa. Malefaka kokoa izy ary mandrakotra sakany midadasika kokoa noho ny faucet nentim-paharazana. Araka ny anarany, ny faucet ao an-dakozia dia ampiasaina ao an-dakozia mba hifanaraka amin'ny sinko. Ny fiovan'ny lokon'ny faucet ao an-dakozia dia mifandray akaiky ...
Ny faucet amin'ny rindrina dia ny handevenana ny fantsom-pamatsian-drano ao amin'ny rindrina, ary hitarika ny rano mankamin'ny vata fanasana na milentika any ambany amin'ny fantsom-batana. Mahaleo tena ny faucet, ary mahaleo tena koa ny koveta / sink. Ny kovetabe na koveta dia tsy mila mandinika ny fampifangaroana anatiny miaraka amin'ny fau ...
Fianakaviana maro no tsy zatra mampiasa fitoeram-pako natsofoka ary mahatsapa fa matsiro ny fako ao anaty kabinetra. Fa manimbolo ao an-dakozia ve ny fako? Sa mifototra amin'ny tsy famoahana ny fako mandritra ny herinandro ity fandàvana ity? Ankoatr'izay, amin'ny ankapobeny dia misy fonony ao amin'ny kabinetra. Fanadiovana ara-potoana w ...
Hardware an'ny Kabinetra ao an-dakozia
Ny kabinetra ao amin'ny kabinetra ao an-dakozia dia mizara ho fitaovana fototra sy fitaovana maharitra. Ny voalohany dia ny anaran'ny ankapobeny an'ny vondrona hinge sy ny rail rail, ary ny faharoa dia ny anaran'ny ankapobeny an'ny fitaovana ampiasaina mivantana toy ny fitoeram-panangonana harona. Ny fitaovana enti-miasa fototra ao an-dakozia dia ahitana: h ...
Raha ampitahaina amin'ny lovia fanasana keramika nentim-paharazana, ity vilia fanasana ity dia tsy ny fisehoan'ny kristaly sy ny lokony mamirapiratra ihany, fa koa ny fitaratra mangarahara sy matevina, izay tsy mora ny mamelona bakteria ary manana tombony amin'ny fanadiovana mety . Noho izany, io ...
Ahoana ny fisafidianana bara fandroana ionic？
Ny lohan'ny fandroana ion ratsy dia malaza be any ivelany. Fantatrao ve hoe inona ny lohan'ny fandroana ion ratsy? Inona no fiasa tsy manam-paharoa an'ny lohan'ny fandroana ion? Avelao aho hampahafantatra azy anao anio. Ny fandroana ion ratsy dia ny manampy vato maifan, tourmaline ary poti-ion tsy miiba ao amin'ny fantsona fidiran-drano ...
Fa maninona no tianao ny fandroana vy?
Ny fandroana vy tsy misy fangarony dia iray amin'ireo ranonorana be mpampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Satria maro ny toetran'ny vy tsy misy fangarony, maro ny fianakaviana vonona ny hampiasa fandroana vy tsy manify. Ho fanampin'izay, inona ny tombony azo avy amin'ny fandroana vy tsy misy fangarony? Andao hazavao ny tombotsoan'ny stainless ...
Toetran'ny karazana Countertop tsirairay
Raha te hampiasa maharitra ny kabinetra ianao dia tena ilaina ny countertop! Ny latabatra mafy orina sy mateza ary tsara tarehy dia hahatonga antsika tsy ho ratsy kokoa rehefa mahandro. Saingy maro ny namana tsy mahalala firy momba ny latabatra kabine, ary matetika tsy mahalala misafidy. Androany, andao ...
Ny fanasokajiana ny varavaran'ny kabinetra
Ny varavaran'ny kabinetra dia sokajina amin'ny fitaovana: tontonana haingon-trano roa, takelaka miorina, takelaka fanaovana mofo, varavarana vy vita amin'ny kristaly, takelaka akrilika ary takelaka hazo mafy. Tontonana haingon-trano roa sosona, izany hoe tabilao melamine, ny substrate matetika dia zana-kazo, ary ny amboniny dia vendrana melamine. Tombony: t ...
Maninona no tianay ny vato voapaika?
Ny singa lehibe amin'ny vato voapaika dia vovoka sy tanimanga voajanahary. Raha ny tena izy, dia vato matevina miovaova. Navoakan'ny rafitra gazety 10000 taonina amin'ny hafanana ambony ambonin'ny 1200 ℃ izy io. Inona avy ireo tombony azo amin'ny vato voaveta? ① Manao fanoherana sy fanoherana ny harafesina Ny hamafin'ny Mohs o ...
Fampitahana ny Countertop amin'ny kabinetra samihafa
Ny latabatra hafa an'ny olona dia madio sy madio toy ny vaovao nandritra ny folo taona. Na countertops miloko maivana sy maivana izy ireo na countertops miloko mainty sy kanto, ny fifantohana raha mahazaka loto dia tsy loko, fa ara-nofo. Manomboka amin'ny 2012 ka hatramin'ny 2019, olona maro ...
Voabahana sy bobongolo ao amin'ny Kithen Cabinet
Voasakana sy nalentika ny tatatra ao an-dakozia. Voasakana ny fantsom-pako ao am-pinana ao an-dakozia, izay olana mahazatra. Rehefa vita ny fanakanana ny fantsona dia tokony hosarihana avy hatrany, raha tsy izany dia hiteraka fihoaran'ny rano maloto. Voasakana ny fantsom-pako. Amin'ny ankapobeny dia sakanana ny kiho, izany hoe ny p ...